रोटरी क्लब अफ बालाजु र इनर ह्विल बालाजुको संयुक्त पहलमा दक्षिणकाली छैमले स्थित वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न -
रोटरी क्लब अफ बालाजु र इनर ह्विल बालाजुको संयुक्त पहलमा दक्षिणकाली छैमले स्थित वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न
समय सान्दर्भिक	काठमाण्डाैं	भदौ २१, २०७८
काठमाडौँ । रोटरी क्लब अफ बालाजु र इनर ह्विल बालाजुको संयुक्त पहलमा दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नं ८ छैमले स्थित वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । वृक्षारोपण कार्यक्रमको आयोजना रोटरी क्लब अफ बालाजु र इनर ह्विल बालाजुको संयुक्त पहलमा गरिएको थियो ।
ग्रिन छैमले नारा राखेर गरिएको वृक्षारोपण कार्यक्रममा रोटरी क्लब अफ बालाजुका सभापति रमेश कुमार प्रधान, कोआबिइनफ ह्विल बालाजुका सभापति सहनशीला मानन्धर साथै डिस्ट्रिक्टबाट आउनु भएका ए.जी. मनोज कंडेलको प्रमुख आतिथ्यमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
उक्त बृक्षारोपण कार्यक्रममा रोटरी क्लबका निवर्तमान सभापतिहरूका साथै रोटरीका सदस्यहरुका अलवा इनर ह्विल बालाजु क्लबका निवर्तमान सभापतिहरु र सदस्यहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नं ८. सिद्धी गणेश सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सानु कान्छा राई लगायत छैमलेका स्थानीय बासिन्दाहरुको समेत उक्त बृक्षारोपण कार्यक्रम सहभागिता रहेको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा स्वागत भाषण निर्वतमान सभापति प्रेमप्रसाद ढुंगानाले गर्नुभएको थियो । स्वागत भाषणको क्रममा उहाँले भन्नु भयो वृक्षारोपण गरेर मात्र पुग्दैन यसलाई बचाउन हुर्काउनका साथै यस जंगलबाट धेरै फाइदाहरु लिन सक्नु पर्छ । बोेटबिरुवा रोपिसकेपछि यसलाई संरक्षण गर्न अति आवश्यक भएको भनाइ राख्नुभयो ।
इनर ह्विल बालाजुका सभापति सहनशिला मानन्धरबाट रोटरी क्लब बालाजुले इनर ह्विल बालाजुलाई संयुक्त कार्यक्रमा सहभागी बनाएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । आगामी दिनमा समेत यसरी नै संयुक्त कार्यक्रममा भाग लिएर अघि बढ्ने राख्नुभयो ।
सिद्धीगणेश समुदायिक बन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सानुकान्छा राईले उक्त बनको इतिहासको बारेमा चर्चा गर्नुभयो । आफनो इलाकामा १४ वटा उपभोक्ता समिति रहेको समेत जानकारी दिनुभयो । यस बनमा बोट बिरुवा वृक्षारोपण गरेर मात्र नहुने, कस्तो जातको बोट बिरुवा लगाउनु पर्ने पनि प्रष्टाउनु भयो । वृक्षारोपण गरेका बोट बिरुवाहरुको उचित सम्बर्धन र संरक्षण गर्नु पर्ने उतिकै आवश्यक भएको भनाइ राख्नुभयो ।
डिस्ट्रिक्ट वातावरणका चियरप्रसन भुवन श्रेष्ठले वातावरणको लागी “ग्रिन भ्याली ग्रिन नेपाल“ नारा बोकेर अघि बढिरहेको जानकारी गराउनु भयो । यसबाट भ्यालीलाई मात्र नभएर सिङ्गो नेपालमा नै बिस्तार गर्नु पर्ने भनाइ राख्नु भयो । बोटबिरुवा बृक्षारोपन मात्र गरेर नपुग्ने यसको संरक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस सामुदायिक बनमा चाहिने आवश्यक बोट बिरुवाहरु उपलब्ध गराइदिने वचन समेत दिनु भयो ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा रोटरी क्लब अफ बालाजुका सभापति रमेशकुमार प्रधानले छैमलेको सामुदायिक बनमा बिभिन्न प्रजातिका बोटविरुवाहरु वृक्षारोपण गरेको भनाइ राख्नुभयो । साथै बोटबिरुवाहरु हुर्काउन र जोगाउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक रहेको भनाई राख्दै वृक्षारोपण गरेको स्थानमा बोट बिरुवाहरुको अवस्था कस्तो छ भनेर हेरविचार गर्नु आवश्यक रहेको भनाइ राख्नु भयो ।
बृक्षारोपन कार्यक्रममा एजी मनोज कंडेल वातावरण चियर प्रसन भुवन श्रेष्ठ, इनर ह्विल बालाजुका सभापति सहनशीला मानन्धरका साथै स्थानिय ब्यक्तित्वका सार्थ क्लवका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेका थियो । कार्यक्रमको संचालन रोटरियन हरि सिटौलाले गर्नुभएको थियो ।
वि.सं.२०७८ भदौ २१ सोमवार १८:५०
श्रीलङ्कन एअरलाइन्सको पहिलो नेपाल उडान, एक सय ४९ यात्रु बोकेर फर्कियो
गोरखाको मनकामना र गोरखकाली मन्दिर भदौ २३ देखि खुला गरिने